ကြည့်ရှုသူတိုင်း မှင်သက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေ ကို စတိုင်အလန်းလေးနဲ့ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ကြည့်ရှုသူတိုင်း မှင်သက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေ ကို စတိုင်အလန်းလေးနဲ့ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မြင်သူ တိုင်း ငေး လောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင် ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက် ဝန်း ကို သိကြ မယ် ထင် ပါ တယ် နော်..။ မော် ဒယ်လ် လော က ကို ဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ် ပါ တယ် … . ယောကျာ်း လေး ပရိ သတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေး မှု ရရှိထား တဲ့ သူမ က တော့ social media လော က မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ် ယောက် လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူ လေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များ ကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာ တွေ့ ရပါ တယ်..။
အခု လည်း “ကိုကို့ secretary မလေး လုပ်ချင်လို့” ဆို တဲ့ Caption လေး နဲ့ အလန်းစားပုံ လေး တွေ တင်ပေးလိုက် ပါ သေး တယ်..။ ပုံလေးတွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ် ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။သူမ ကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေးလာ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . မော်ဒယ် မျက်ဝန်း ရဲ့ အလှ ပုံရိပ် လေး တွေကို ပရိတ် သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေး လိုက် တယ် နော် … .
ျမင္သူ တိုင္း ေငး ေလာက္ တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ ဝန္း ကို သိၾက မယ္ ထင္ ပါ တယ္ ေနာ္..။ ေမာ္ ဒယ္လ္ ေလာ က ကို ဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ား အျပား ရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ေယာက်ာ္း ေလး ပရိ သတ္ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ အားေပး မႈ ရရွိထား တဲ့ သူမ က ေတာ့ social media ေလာ က မွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ ေယာက္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီက်ၿပီး အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူ ေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ား ကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာ ေတြ႕ ရပါ တယ္..။
အခု လည္း “ကိုကို႔ secretary မေလး လုပ္ခ်င္လို႔” ဆို တဲ့ Caption ေလး နဲ႔ အလန္းစားပုံ ေလး ေတြ တင္ေပးလိုက္ ပါ ေသး တယ္..။ ပုံေလးေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္း တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္းေန တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။သူမ ကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ် ရိုက္ထား တဲ့ ပုံေလး ကို တင္ေပးလာ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ေမာ္ဒယ္ မ်က္ဝန္း ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ ေလး ေတြကို ပရိတ္ သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားမြင်နေရအောင် အလန်းစားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး
Next post ချစ်စရာပုံစံလေးနဲ့ အသဲယားဖွယ် လှလှပပလေးရိုက်ထားတဲ့ ဆုအိမ်စံရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး